Monday April 10, 2017 - 21:48:39 in Wararka by Super Admin
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay wareysi gaar ah oo ay la yeelatay Waaliga Wilaayada Islaamiga Banaadir Sheekh Cali Muxamed Xuseen Cali Jabal kaasi oo Waaliga uu kaga hadlay weerarkii Naf-hurnimo ee maanta lagu qaaday xerada ciidanka ee
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay wareysi gaar ah oo ay la yeelatay Waaliga Wilaayada Islaamiga Banaadir Sheekh Cali Muxamed Xuseen Cali Jabal kaasi oo Waaliga uu kaga hadlay weerarkii Naf-hurnimo ee maanta lagu qaaday xerada ciidanka ee Warshadii hore Nacnaca degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho.
Sheekh Cali Jabal ayaa ugu horeyntii ka hadlay kana tahniyadeeyay xureynta magaalada Ceelbuur oo maalmo ka hor laga xureeyay ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo muddo saddex sano ah duulaan ku joogay magaaladaasi.
Waaliga ayaa bulshada magaalada Ceelbur degta ku tilmaamay bulsho ku dayasho mudan maadaama magaalada ka Hijroodeen markii Xabashida Itoobiya Saddex Sano ka hor duulaanka kusoo qaaday magaaladaasi.
Dhanka kale Sheekh Cali Jabay ayaa faahfaahin ka bixiyay Camaliyaddii Istish-haadiyada aheed ee maanta lagu qaaday xerada ciidanka ee Warshadii hore Nacnaca ee degmada Wadajir’isagoona xusay in camaliyaddaasi lagu dilay 25 askar iyo saraakiil ah.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Waaliga Banaadir.
Nin gacan ku dhiigle ah oo lagu qisaasay degmada Ceel Cali [dhageyso].